Articles tagged 'pakare paye'
Tuku is my father - Zahara 6 September 2018 HARARE - South African songbird Zahara has described superstar Oliver Mtukudzi as a father figure. Zahara was in the country over the weekend for the annual Solo Festival that was held at superstar Oliver "Tuku" Mtukudzi's imposing Pakare Paya Arts Centre in Norton. The songstress posted a pho...
Zahara delights at Tuku's Solo Fest 3 September 2018 HARARE - Fresh from her United States of America tour, South African songbird Zahara left throngs at Pakare Paye eating out from the palm of her hand as she shone at this year's edition of Solo Festival. The festival held at Pakare Paye Arts Centre in Norton on Saturday saw the diva sharing th...
Vedu set to invade Pakare Paye 10 March 2018 HARARE - Rising all-female ensemble, Vedu, are set to ignite the sleepy town of Norton when they play at Pakare Paye Arts Centre to celebrate Faith Mtukudzi's birthday on Friday next week. Speaking on the sidelines of an Andy Muridzo show, which they curtain-raised at Jazz 24/7 on Wednesday, t...
Sam Mtukudzi commemoration on tonight 18 March 2016 HARARE - All roads tonight lead to Pakare Paye Arts Centre in Norton where a number of prominent musicians will take turns to entertain friends and fans of the late Sam Mtukudzi in a gig dubbed “Sam Mtukudzi Commemoration”. While the main focus will be on Gary Tight, who will perform Sam's son...
Jikinya Dance Festival set for tomorrow 26 November 2015 HARARE - Music superstar Oliver Mtukudzi's Pakare Paye Arts Centre in Norton will host the 13th edition of Jikinya Dance Festival tomorrow where 10 provincial primary school champions will battle it out for the $2 000 first prize. The Jikinya Dance Festival is organised by the National Arts Co...